Nerds, Steve Jobs iyo Bill Gates ayaa muusikada ku dhufan doona Broadway | Wararka IPhone
Nerds, Steve Jobs iyo Bill Gates ayaa muusikada imanaya Broadway
Tirada Steve Jobs waxaa loo isticmaalaa xadka aan laga fiirsan. Dhinaca kale, waxaan ka helaynaa labada filim ee la soo saaray iyagoo isku dayaya inay u sheegaan nolosha Steve Jobs, mid ka guul badan kan kale, in kasta oo labaduba ay ku yar yihiin guulaha ay ka gaareen Box Office-ka, kii ugu dambeeyay ee uu jilo Michael Fassbender ayaa ilaa hadda leh wuxuu urursaday laba Golden Globes waxaana loo magacaabay laba Oscars oo ka socda Akadeemiyada Hollywood oo lagu daro seddex abaalmarin oo BAFTA ah, abaalmarinta warshadaha filimada Ingriiska. Laakiin marka lagu daro filimada, dhowr dukumiinti ayaa sidoo kale la duubay, dhammaantood marwalba iskudaya muujinta dabeecada adag ee halyeeyada.
Hadda nolosha Steve Jobs, oo ay weheliso tan Bill Gates, ayaa lagu wadaa in lagu soo bandhigo tiyaatarka Longacre ee Broadway, muusig la daawan doono April 21. Shaqada qayb baa ahayd waxaa qoray mid ka mid ah qoraayaasha 'Robot Chicken' (aad ayaa loogu taliyay jidka). Muusigani wuxuu isku dayi doonaa inuu sheego guulaha labada jilaa marka lagu daro xafiiltankii ka horyimid sannadihii ay u kala socdeen shirkadaha ay ka tirsan yihiin. Inta lagu jiro shaqada waxay rabaan inay adeegsadaan horumarka ugu dambeeyay ee teknolojiyadda sida 3D hologram, saadaasha dijitaalka ah. Magaca muusigani wuxuu noqon doonaa Nerds, waa wax haddii aan istaagno inaan ka fikirno ay ku habboon tahay Steve Jobs marka loo eego Bill Gates, tan iyo Microsoft illaa dhowr sano ka hor, kaliya (marka laga reebo Zune) wuxuu diiradda saaray barnaamijka kumbuyuutarka .
Sheekada labada indheer garad waxaa lagu soo qaatay dhowr filim iyo buugaag laakiin hadda, sida shaqsiyaadka kale ee ka kala yimid dhinacyada kala duwan, waligood lama geyn tiyaatarka wax kayarna muusik. Nerds, A Musical Dot-Comedy wuxuu doonayaa inuu muujiyo in muusigga Broadway uusan ahayn inuu noqdo midka caadiga ah ee tiknoolajiyada ay ka muuqato maqnaanshaheeda. Muusiggaan waxaan rabnaa inaan ku isticmaalno horumarkii ugu dambeeyay ee tikniyoolajiyadda, sidaan kor ku soo faallooday, si aan isugu dayno inaan u soo jiidanno daawadayaal badan intii suurtagal ah. Wax yar ayaa laga ogyahay jilayaasha jilaya jilayaasha waaweyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Nerds, Steve Jobs iyo Bill Gates ayaa muusikada imanaya Broadway
Tufaaxu wuxuu galaa podium-ka noocyada ugu isticmaalka badan ee Imaaraadka Carabta